Waa’ee Ajjeechaa Boodii Gaardii MM Dr Abiyyi Duraanii – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaa’ee Ajjeechaa Boodii Gaardii MM Dr Abiyyi Duraanii
Waa’ee Ajjeechaa Boodii Gaardii MM Dr Abiyyi Duraanii kan ture Bishooftutti Ajjeefamee;
Hubachiisa:- Barreeffama kana Afaan biraatitti hin hiikinaa!
Addis Alamuu jedhama. Dhalootaan Arsii lixaa Aanaa Adaabbaa Ganda furunaati. Addis Loltuu Miseensa RIB ture. Wal diddaa Ajejoota waraanaa wayyaaneen cunqurfamaa waan tureef Raayyaa ittisa biyyaa keessaa bahe jedhama. Bara darbe yeroo koomishiniin poolisii MNO Loltoota RIB sabaan oromoo ta’an gara maatitti deebi’anii turan walitti qabee sanqalleetti leenjisuun ni yaadatama. Addisis sanqalletti leenjii irra Deebii Poolisii Humna addaa Oromiyaa ta’uuf fudhateen dandeettii addaa argisiisee ture jedhama.
Dandeettiin isaatis Ajaa’ibsiifamuun Leenjii Kumaandoo akka fudhatuuf Chaayinaatti ergamee ture. Erga chaayinaa deebi’ees Boodii Gaardii MM Dr Abiyyi ta’ee hojjatee Jira. Ji’oota muraasa as immoo Miseensa Humna addaa Poolisii oromiyaatti deebi’ee akka hojjatuuf dirqama fudhate jedhama. Dheengadda Caamsaa 17/2011 galgala Naannoo sa’aatii 4:00 hiriyaa isaa Gaardii Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuu Geetuu jedhamu waliin akka mana shubbisa Halkanii “Mana Appilii” jedhamu bashannanaaf deemee ture Miseensota Poolisii KBO Oromiyaa irraa odeeffadheen Jira.
Haaluma kanaan Mana shubbisa Halkanii “Appilii”keessatti osoo taphataa taphatanii “Muuziqaa sirba Afaan oromoo'”irra akka ka’aniif Addis gaafatee ture jedhama. Sana booda “Ati eenyu kan taate muuziqaan afaan oromoo akka banamu kan gaafattu?” Jedhanii arrabsuun Lola itti kaasan jedhama. Wal dhabdee maamiltoota mana san keessa jiran wajjin harkaan wal qabatanii akka wal-tuman Hiriyaan Addis kan yeroo sana wajjin jiru Geetuun dubbateera.
Dhiiboo fi rukuttaa mana keessatti Addis waliin namoonni gareen itti bobba’anis Addis Jabeenya isaatitti fayyadamuun ofirraa qolachuu danda’ee jira jedha Hiriyaan isaa Geetuun. Garee Mana shubbisaa keessatti Addisiin walitti bu’anis,mana keessaa gad bahuun Mana fuulduratti eeggatan jedhama. Akkuma Addisii fi Hiriyaan isaa Geetuun Gad bahaniin dhukaasni itti baname jedhama.
Dhukaasa mana shubbisa Halkanii (Night Club) Appilii fuulduraa eegalee Garee gareen wal qooduun Daandii Turisti irraan Gara M/B/Bishooftuu sadarkaa 2ffaa(Karaa Daandii Mooraa Poolisii KBO)tti geessu Addisii fi Geetuutti dhukaasaa akka turan geetuun dubbatee jira.
Haaluma kanaan dhumarratti Daandii Barattoonni M/B/Bishooftuu sad,2ffaa geessu ulaa hanqisuun dhukaasa bitaa fi mirgaan itti banameen #Gaardii Dr Abiyyi kan ture Addis Alamuu wareegameera. Hiriyaan isaa Geetuun immoo lubbuun baraaramee jira. Duuti hin ooltu. Ilmi dhiiraa Gaafa dhalate du’e. Addis sabboonummaa oromummaan argisiise sababeeffachuun Diinni Lubbuu isaa galaafattus Addis Du’a dhiirri du’u du’e.
Ajjeechaa Addis Alamuu irratti Raawwatame sababeeffachuun poolisiin KBO Shakkamtoota Abbaa Qabeenyaa Mana shubbisaa Appilii fi Nama Addis rukute jedhamee shakkamu tokko to’annoo jala oolchanii jiru. Kana malees Kaleessaa Galgala Dhukaasni Halkan Guutuu Dhukaafamaa bule.Ajjeechaan Addis irratti raawwate akka salphaatti ilaalamuus hin qabu. Bishooftuun Hooggansa Kutannoo qabu kan nageenya uummataa fi Faayidaa Dantaa hawaasa magaalichaa kabachiisu barbaaddi.kana ta’uu baannan uummata oromoo magaalaa kana keessa jiraatanitti balaa hamaatu dhufuuf jira.
Odeeffannoo kana funaanee akkan barreessuuf kan na taasise Namoonni baay’een Ajjeechaan Addis Alamuu irratti Gareen qindaa’amee raawwatame finfinneetti jedhanii barreessu. Ani immoo bakka Addis Itti wareegame Miseensota Poolisii Humna Addaa oromiyaa irraa odeeffadhee suura kaaseen jira.Armaan gadittis suura bakka itti Addis Wareegame ni argattu. Addis Garuu Bishooftutti Ajjeefame.Gareen Nafxanyootaa Bishooftuu keessatti wal ijaaranii Daddabarsa Meeshaalee waraanaa Gurguddoottis fayyadamuun doorsisaa fi dhaadannoon dhageessisuun halkan halkan dhukaasa taasifasaa jiru. Addis kan ajjeesanis Jibba oromoof qabaniif akka ajjeesanis beekkamaadha. Maatii fi firoottan isaatif jajjabina hawwina!
Via: Senesa Megersa
1. Nami akkasii beekamaan maal barbaacha bakka shubbisa halkanii (Night Club) dhaqa ? Ega dhaqee immoo maaliif haqa namoota biroo eegee ulfinaan gara mana isaatti ni galle ?
2. Namooti isa ajjesan sun, durumaanuu waan dhufu simachuuf qophawoo (hidhatoo) akka ta’an agarsiisa. Kana jechuun warri “ጋላ ገዳይ” jedhaman ammayyuu lafa jala of ijaaranii hidhatanii Oromoota jidduu sosocha’u jechuudha.
3. Kun ifumatti kan agarsiisu, tuffii Oromooti, malee sirba Oromoon barbaadaan sadarkaa du’aatiin waan nama geesisu miti.
Kanaafuu, furmaati jiru, Oromoon osoo hin jaallatin, magaala hanga baadiyaatti hidhatee, warra akkasii kana saa’atii 24 to’anna (surveillance)jala galchuu qaba. Kana yoo hin taane, bor mataa Oromoo irra dhangala’uu danda’u.